Feellife Health Inc is an international enterprise specializing in researching, developing, manufacturing and marketing of portable mesh nebulizers. Our vision is to provide the 3rd way of dosing for human beings. FEELLiFE nebulizer-TWO Titanium ONE CHIP ၏အဓိကနည်းပညာကျွမ်းကျင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့က ISO 13485 နှင့် CFDS လက်မှတ်များလွန်ခြင်း, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပိုမိုထက် 10 မူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ ငါတို့သည်အစဉ်မပြတ် CE နဲ့ FDA ကများ၏စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာအတွက်တင်းကြပ်စွာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကောင်းစွာ 50 ကျော်နိုင်ငံတွေထံရောင်းချခဲ့ကြခြင်းနှင့် FEELLiFE ကွက် nebulizer ၏အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းအဖြစ်မဲပေးဖြစ်ပါတယ်။
R & D အတွေ့အကြုံကို9နှစ်
nebulizer စီးရီး mesh 20 အထက်
နိုင်ငံတကာမူပိုင်ခွင့် 10+ မူပိုင်ခွင့်
သငျသညျကွက် nebulizers ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
air ကို 360+
air ကို Plus အား
air ကို Pro ကို
စုံလင်တိတ်ဆိတ်! တစ်ဦး mechanics ရဲ့လေကြောင်းတွန်း nebulizer အဖြစ်ဆူညံရှိသည်ဖို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်ခြားနားချက်၏လောကဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။ , ဒဏ်ငွေအသေးစားနှင့်ခရီးဆောင်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ဈဘက်ထရီအားသွင်းရန်ရှိသည်မတိုင်မီအများအပြားကုသကြာရှည်ခံသည်။
ငါမည်သူမဆိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲငါ၏အရုံးခန်း၌ငါ့စားပွဲခုံမှာအသုံးပြုရန်နိုင်ခဲ့တယ်လက်တွေ့ကျကျအသံတိတ်, အလွန့်အလွန်အဆင်ပြေ။ ငါ၏အကြီးမားတွန်း nebulizer သကဲ့သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာထမ်း။ တာဝန်ခံကြာရှည်ခံသည်။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုသုံးစွဲဖို့လက်အပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူသော။ မဟုတ်တဦးတည်းတိုင်ကြားချက်။ အကြံပြု !!
ငါတစ်လအောက်တွင်အနည်းငယ်အဘို့ဤ nebulizer ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးယခုအထိငါကအတော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာ nebulizer နှင့်အဆက်မပြတ်ဘက်ထရီကိုအစားထိုးရန်သင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာစံ USB ကြိုးသုံးပြီးအားသွင်းဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါဟာအစသန့်ရှင်းရေးရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာတစ်နှစ်အာမခံနှင့်တကွကြွလာ။ မျှော်လင့်ငါကလိုအပ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီအစက်နာတာရှည်မှိုထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားကိစ္စများဆက်ဆံဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဆေးဝါးဆရာဝန်များကအကြံပြုခဲ့သည်။ သူဟာပုံမှန် nebulizers ရုံအဆုတ်ထဲသို့အဖြစ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆေးဝါးမကယ်မနှုတ်ဘူးကပြောပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒါဝေးကအတူအတွေ့အကြုံကောင်းရှိခြင်းနေကြသည်။
ငါသည်ဤသူမ၏တစ်ခုလုံးကိုအသက်အဘို့အပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါခံစားနေရလျက်ရှိသည်ခဲ့သူပညတ်တိကငါ့အမိအဘို့ဝယ်လေ၏။ ဒါဟာအလွယ်တကူပတ်လည်သယ်ဆောင်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့ဇစ်အိတ်တွေနဲ့ရောက်လာတယ်။ အဆိုပါ device ကိုသူ့ဟာသူကောင်းကောင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ချောမွေ့ပစ္စည်းအပြင်ဘက်တွင်။ အကြံပြုပေးနိုင်မလား!
ကျော်ကို 4000 ဖောက်သည်များက Powered ကြောင့်သူတို့ရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခိုလှုံပါ၏။
နှစ်ပေါင်း R & D အတွေ့အကြုံ
အပိုင်းပိုင်း / နေ့
နိုင်ငံပေါင်း '' ဖောက်သည်
မကြာမီသိကောင်းစရာများ & သတင်း
post ကို + အမြင်ကပို
ဝေမျှမယ် Post ကို ( 12) အကြိုက်ဆုံး ( 12) Comments ( 12)